N+ 200712 မြတ်စွာဘုရား၏ကျေးဇူးတရား | The Mandalay Gazette-Myanmar/Burma News Media Forum Network
Buddhism » N+ 200712 မြတ်စွာဘုရား၏ကျေးဇူးတရား	30
ဟောဖော်ညွန်ကြား မြတ်တရားကြောင့် ဤကားကုသိုလ် အကုသိုလ်နှင့်
N+ 200712 မြတ်စွာဘုရား၏ကျေးဇူးတရား ဘုရားရှင်တော် မပွင့်ပေါ်လျှင်
ကြိုးပမ်းကြပါလေ။ ရိုးရှင်းပြီး အင်မတန်အဓိပါယ်လေးနက်ပြည့်ဝတဲ့ ကဗျာလေးကို တောင်မြို့ မဟာဂန္ဓာရုံဆရာတော်ဘုရားကြီးက စပ်ဆိုခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။ http://mandalaygazette.com/90448/creative-writing
surmi says: ဘုရားရှင်နဲ့  တရားတော်တွေကို လိုသလိုအဓိပ္ပါယ်ဖွင့် နေကြတဲ့ လူတွေကြောင့် 
nature says: ကိုယ်ကြိုက်သလိုကျုံးသွင်းထားတဲ့အယူအဆတွေကြည့်ပြီး မွတ်စလင်ဘာသာကိုများခေါင်းစဉ်ပြောင်းပြီး မိုးပြာ ဖြစ်လာသလားလို့။ မိုးပြာကိုလည်းခေါင်စဉ်ထပ်ပြောင်းပြီး ဗုဒ္ဓဘာသာလို့ထပ်လုပ်နေသလားလို့ထင်မိတယ်။ မိုးပြာတွေရဲ့သိသာတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ ဗုဒ္ဓဘာသာကိုတိုက်ခိုက်ပြီးအစားထိုးနေရာယူဖို့ဆိုတာတော်တော်လေးသိသာပါတယ်။ အကြမ်းနည်းနဲ့ဘာသာရေးစစ်ပွဲတွေနဲ့တကမ္ဘာလုံးဝါးမြိုဖို့က မကိုက်တော့ အနုနည်းနဲ့များ ပြောင်းသုံးလာသလား ထင်ရတယ်။ မန်းဂေဇက်ရွာကြီးစည်ကားလာတာကို ရွာသံယောဇဉ်နဲ့ဝမ်းသာပျော်ရွှင်မိပေမဲ့ စည်ကားလာတာနဲ့အမျှ မိုးပြာဘုန်းကြီးလို့ဆိုတဲ့သူတွေ ဒလဟောဝင်လာပြီးရွာတံခါးပိတ်တရားဟောတာတွေ့ရတော့ တဖြေးဖြေးနဲ့ မိုးပြာ ၀ါဒဖြန့်site ကြီးတခုတောင်ဖြစ်နေပြီလားလို့သံသယ၀င်မိတယ်။ ကျွန်တော်တို့ အားလုံး အားကြိုးမာန်တက် ရွာကြီးစည်ကားရေးအတွက် အုတ်တချပ်သဲတပွင့် အားပေးနေကြတာဟာ မိုးပြာတွေတရားဟောဖို့လူစုပေးထားသလို ဖြစ်နေရင် အဆိပ်ပင်ရေလောင်းသလိုဖြစ်နေမှာစိုးတာကြောင့် ဘယ်လိုများလုပ်ရင်ကောင်းမလဲဆိုတာကို စဉ်းစားရင်း ရွာထဲအ၀င်ကျဲခဲ့ပါတယ်။
မောင်ပေ says: ပြန်လည်ဝေမျှပေးလို့ 
nature says: မောင်ပေရေ-
မိုးတိမ် says: အားတက်မိပါတယ် ကျေးဇူးပါကိုနေချား
nature says: တခါတခါ ပေါက်တတ်ကရမိုးပြာစာတွေပွထနေတာနဲ့တော်တော်လေးအာရုံနောက် လို့ ရွာပြင် မှာနားအေးပါးအေးခဏအနားယူနေရင်ကောင်းမလားလို့တခါတခါစဉ်းစားမိတယ်။
မဂွတ် ထော် says: မကောင်းမူကောင်းမူ
nature says: မြတ်စွာဘုရားဟောကြားတဲ့တရားကိုမနာယူပဲ ကုသိုလ် အကုသိုလ်ဆိုတာကို မှန်မှန်ကန်ကန် ခွဲခြားသိနိုင်ဖို့မလွယ်ပါဘူး။ ပုထုဇဉ်တွေအနေနဲ့တခါတရံမှာ အကုသိုလ်ကို ကုသိုလ်လို့ထင်ပြီး လုပ်နေတတ်ကြပါတယ်။
MaMa says: ရွတ်ဆိုလို့လည်း ကောင်း၊ အနက်အဓိပ္ပါယ်လည်း ပြည့်ဝတာမို့ ကျမအလွန်နှစ်သက်မိတဲ့ လင်္ကာလေးတစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။
nature says: မဟာဂန္ဓရုံဆရာတော်ဘုရားကြီးဟာအင်မတန်လေးစားကြည်ညိုဖွယ်ကောင်းတဲ့ သာသနာအကျိုး ကြိုးကြိုးစားစားထမ်းဆောင်ခဲ့တဲ့ ဆရာတော်ကြီးပါ။
ဦးဦးပါလေရာ says: ကျုပ်ဘုရားရှိခိုးတဲ့အခါ ရွတ်ဆိုတဲ့ သရဏဂုံ က ဒီလိုပါ..။
အရီးခင်လတ် says: ဒီလို လူကြီး သူမများ ဆီ နေ အကျိုးထူး စကားများ ကြားနာ ရတာ မင်္ဂလာ တစ်ပါးပါဘဲ။
ရွာထဲ မှာလဲ ဦးခေါင်း သုံးလုံး တွေ များတာ တွေ့ရတာ ဝမ်းသာလှပါတယ်။ ကျေးဇူး ပါရှင်။ ဦးခေါင်း သုံးလုံး နဲ့ ကိုကြီး နေချား၊ ကိုကြီးပါ။ အဟိ။ ;-)
MaMa says: တခါက အမ လို့ ခေါ်ဖူးတာ ခံပေရော့။
nature says: အဟီး …မခင်လတ်ရေ-
တော်သေးတာပေါ့ ခေါင်းသုံးလုံးနဲ့ရပ်သွားလို့ ၊ခေါင်း ၁၀ လုံးဆိုရင်တော့ ဒဿဂီရိဖြစ်ဖြစ်ကရောပဲ။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1808
nature says: သာဓု ၊သာဓု ၊ သာဓု ပါ ဦးဦးပါလေရာ ရေ။
မဟာရာဇာ အံစာတုံး says: ဦးနေချားခင်ဗျာ ..
nature says: အကုသိုလ်ကိုအကုသိုလ်မှန်းမှန်မှန်ကန်ကန်သိပြီး ရှောင်နိုင်ရင်ဆင်းရဲဒုက္ခတွေ ဖြေးဖြေးလျှော့ပါးပျောက်ကွယ်သွားစေနိုင်ပါတယ်။ ကုသိုလ်ကို ကုသိုလ်မှန်းသိပြီး ဆောင်နိုင်ရင် ချမ်းသာသုခတွေတဖြေးဖြေး တိုးပွားလာစေနိုင်တယ်ဆိုပေမဲ့ သဒ္ဒါတရား အခြေခံကောင်းရင်ပိုပြီး အကျိုးများပါတယ်။ မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်တွေဟာ ဥာဏ်ရှိရင်ရှိသလို သုံးတတ်ရင်သုံးတတ်သလို ကောင်းကျိုးအနန္တရရှိစေတဲ့ တန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်တဲ့ ရတနာမြေပုံကြီး တစ်ခုပါပဲ။ ဒါကြောင့်မို့ ဘုရားရတနာလို့ခေါ်ဆိုထိုက်ပါပေတယ်။
Gipsy says: ကိလေသာ ကင်းစင်တော်မူသော မြတ်စွာဘုရား …
nature says: ဒီအရဟံဆိုတဲ့ဂုဏ်တော်လေးကိုပွားများနေခြင်းဟာလည်း ဗုဒ္ဓနုဿတိ ဆိုတဲ့အကျိုးများတဲ့ဗုဒ္ဓအလိုတော်ကျနေထိုင်နည်းလေးတခုပါပဲ။
kai says: THIS UNIVERSAL DECLARATION OF HUMAN RIGHTS
.. ဒီလိုဖြစ်အောင် ဦးနှောက်ဆေး(brainwash လုပ်)ခဲ့.. လုပ်ခဲ့သူတွေဟာ.. အဖမြန်မာပြည်ကို.. ကျိန်စာတိုက်ခဲ့သူတွေဖြစ်ပြီး.. မြန်မာတွေ.. လူ့အခွင့်အရေးကို(တကယ်) မလေးစားနိုင်သမျှ.. ကျိန်စာမိနေဦးမှာပဲလို့.. မြင်ပါတယ်.. ဂေါတမဘုရားရှင်လက်ထက်ကတည်းက.. ဟိန္ဒူဘာသာလွှမ်းမိုးတဲ့.. လူ့အဖွဲ့အစည်းတွေမှာ.. ပြန်မပြော..မော်မကြည့်.. ဦးခိုက်ရသည်အထိ.. လူတန်းစားခွဲတာတွေရှိခဲ့တာပါ..
လွတ်လပ်စွာကွဲလွှဲနိုင်ပါကြောင်း.. (မှတ်ချက်။ ။ ကြိုးစားက သင်သည်(သင်သည်)လည်း ဘုရားဖြစ်နိုင်ပါသည်။)
nature says: လူ့အခွင့်အရေးနဲပတ်သက်လို့ပြေရရင် -
ဥပမာ- လမ်းဘေးမှာနေစရာမရှိတဲ့လူတစုဟာ အိမ်ကြီးအိမ်ကောင်းတခုကို တွေ့တော့ သူတို့အိမ်ပါဆိုပြီးအိမ်ပေါ်မှာနေတဲ့သူကိုတိုက်ခိုက်မောင်းချတယ်။ အဲဒီလူတွေကိုအိမ်ပိုင်ရှင်တွေ ကခုခံမောင်းထုတ်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်။ ကျိန်စာဆိုတာကတော့ ယုံတမ်းစကားတွေပါ။ ကျိန်စာသာတိုက်လို့ရရင် မိုးပြာတွေအခုလောက်ဆိုပြာဖြစ်နေပြီ။ မိုးပြာတွေတိုက်တဲ့ကျိမ်စာနဲ့ကျနော်လည်းပြာဖြစ်နေပြီ။ အခုမိုးပြာတွေလည်းပြာမဖြစ်ဘူး။ ကျနော်လည်း ပြာမဖြစ်ဘူး။ ဒါကြောင့်ကျိန်စာဆိုတာ ကျနော့်အတွက်တော့ရယ်စရာပြောတဲ့ယုံတမ်းစကားတခုလိုပါပဲ။ မြတ်စွာဘုရားကလူတန်းစားခွဲတာကိုလက်မခံဘူးဆိုတာ ဇာတ်နိမ့်ဇာတ်မြင့်ဆိုတဲ့ ဇာတ်နဲ့ခွဲတဲ့ လူတန်းစားခွဲတာကို လက်မခံတာပါ။ မြတ်စွာဘုရားကလူအဆင့်အတန်းခွဲတာ ကိုယ်ကျင့်တရားနဲ့သာ ခွဲခြားနိုင်တယ်။ (ရှင်ဘုရင်မျိုး၊ပုဏ္ဏားမျိုး၊ သူတောင်းစားမျိုး စတဲ့အမျိုးနဲ့ခွဲတာ ဆင်းရဲချမ်းသာ ရာထူးအာဏာ နဲ့ခွဲတာမျိုး ဇာတ်နဲ့ခွဲတာမျိုးကို လက်မခံပါဘူး။ )
ပြောပြန်ပြီပေါက်တတ်ကရ။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1319
Gipsy says: တရားစစ်မှန်၊ ကျင့်ကြံမှန်မှ၊ ချမ်းသာသုခရနိုင်သည်၊ အတွေးအခေါ် မှားလို့ ၊
nature says: Brain wash ဆိုတာလေးရကိုရှင်းဖို့ကျန်ခဲ့လို့။ မိုးပြာတွေရဲ့ရည်ရွယ်ချက်က ဗုဒ္ဓဘာသာကိုတိုက်ခိုက်အမည်ခံပြီးအစားထိုးဝင်ရောက်ဖို့လွယ်ကူမယ်လို့ယူဆပုံရပါတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မြန်မာနိုင်ငံဟာကမ္ဘာအလယ်မှာ အားနည်းတဲ့နိုင်ငံတခုဖြစ်နေလို့ပါပဲ။ မိုးပြာတွေဟာ ဘုရားဟောတဲ့အချက်တိုင်းကို negative ရှုထောင့်က တိုက်ခိုက်ဖျက်ဆီးဖို့ကြိုးစားနေကြတာပါ။ မိုးပြာတွေရဲ့အမှားကို ထောက်ပြခဲ့တဲ့ မစိုးရိမ်စာသင်သားကို ကျေးဇူးတင်ရမည့်အစားရန်ငြိုးဖွဲ့ အမုန်းပွားပြီး ရွာထဲမှာဖွခဲ့ပါတယ်။ မိုးပြာတွေဟာမှားတယ်ဆိုရင်အမှားကိုဝန်မခံပဲ နောက်ထပ်တိုက်ခိုက်ရေးမေးခွန်းတခုကိုထပ်မံထုတ်ပါတော့တယ်။ မိုးပြာတွေရဲ့ပြောကြားချက်အရ မစိုးရိမ်စာသင်သားဟာလေးစားချီးကြူးစရာကောင်းကြောင်းသိလိုက်ရပါတယ်။ မစိုးရိမ်စာသင်သားလူထွက်ရတာလည်း မိုးပြာတွေစနက်ကင်းမှကင်းပေါလေစ။ ဒါကြောင့်မှားတာသိရင်မှန်တာပြင်ဖို့မကြိုးစားပဲ တိုက်ခိုက်ရေးမေးခွန်းအသစ်တွေကိုထပ်ထုတ်တတ်တဲ့ဟိုလူကြီးအပါအ၀င်မိုးပြာတွေဟာ brain wash လုပ်ထားခံရရုံတင်သာမက brain crash လုပ်ထားခံရသူများသာဖြစ်ပါတယ်။
အထူးသတိ။ ။ဟိုလူကြီးဆိုသည်မှာ ဟိုရောက်နေသောလူကြီး ဓမ္မ၀ိဟာရီဆရာတော်ကြီးကိုဆိုလိုခြင်းဖြစ်ပါကြောင်း ရွာသားများအထင်မမှားစေရန် ရှင်းလင်းခြင်းဖြစ်ပါကြောင်း။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1319
Gipsy says: ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံ၊ ဂျာနီဗာမြို့ရှိ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ဘာသာရေးနှင့်
kai says: တခြားသူတွေမသိတောင်… ဒို့ရွာသူားတွေကတော့.. အပေါ်ကစာတွေထဲရေးထားတာတွေဆိုတာ.. လုပ်ကြံလိမ်ညာထားတာတွေပါလို့. သိသင့်တယ်..
အမြင်ကျယ်ကြစေသတည်း… Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 3121
မိုက်ကယ်ဂျော်နီအောင်ပု says: လွဲနေကြပြီဗျို့
Gipsy says: ဟိုက်ရှားလပတ်စ် ….
ကူးချထားပါတယ် ဆိုနေမှ မိုပြာဂိုဏ်းသားတို့ ….။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1808
nature says: ဘာသာဝင်တဦးဟာအခြားဘာသာကိုမဲပေးဖို့ဆိုတာ ခက်ခဲတဲ့ကိစ္စတခုဖြစ်သော်လည်း ရေးသားထားတဲ့အချက်ကလေးတွေက အကျိုးအကြောင်းဆီလျှော်ပါတယ်။ ဒီလိုအကျိုးအကြောင်းဆီလျှော်တာတွေကို လုပ်ကြံလိမ်ညာထားတာ လို့ပြောတဲ့သူ မျက်စိပြူးစေသတည်း။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 7054
ကြောင်ကြီး says: သဂျီးနဲ့ မိုးဗြားဂိုဏ်းသားတွေ ပြောတော့ အဲသလို မဟုတ်ရပါလား…။ မြတ်စွာဘုရားကို သာမန်လူတဦးထက် မပိုဆိုဘဲ…။ မြတ်စွာဘုရား လေးအသင်္ချေနဲ့ ကမ္ဘာတသိန်း ပါရမီဖြည့်ခဲ့ရတာ အဲဒီအရင် ရှစ်အင်္သချေနဲ့ကမ္ဘာတသိန်း နှုတ်ကနေ ဆုပန်ရတာ၊ ဆယ့်ခြောက်အင်္သေချေနဲ့ကမ္ဘာတသိန်း စိတ်ကူးနဲ့ကြံစည် ရည်မှန်းဆန္ဒပြုရတာတွေက အလကားတဲ့ဗျာ..။ တော်တော်ဆိုးဒဲ့လူဂျီး၊ ဘာလို့များ သူ့ကို ဝိုင်းမဆဲဂျဘာလိမ့်..။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1319
Gipsy says: ကြောက်လို့ပေါ့ဗျ ကိုကြောင်ကြီးရာ…